17-06-2020 02:00 PM
22-06-2020 04:00 PM
Federalism Academy 2020
ဟန်းဆိုင်ဒယ်ဖောင်ဒေးရှင်း၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သုတေသနအသင်းနှင့် Yangon University Open Political Society တို့ပူးပေါင်း၍ ဖက်ဒရယ်အကယ်ဒမီသင်တန်း ၂၀၂၀ ကို အွန်လိုင်းမှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားနေပါသည်။
Covid-19 ကပ်ရောဂါအခြေအနေကြောင့် သင်တန်း၏ ပထမပတ်ကို ယခုကဲ့သို့ အွန်လိုင်းမှ ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်း ဒုတိယပတ်နှင့် တတိယပတ်တို့ကို ပုံမှန် အခြေအနေအတိုင်း ကျင်းပရန် မျှော်မှန်းပါသည်။ တက်ရောက်ကြသည့် သင်တန်းသားများနှင့် သင်ကြားပေးသည့် နည်းပြများကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်။
The Hanns Seidel Foundation, the Centre for Development and Ethnic Studies and Yangon University Open Political Society organized Federalism Academy 2020 online. This programme started in 2019 and due to its success, we decide to continue this programme annually.
Because of Covid-19 crisis, we finally organized the first module virtually. We hope the rest modules will be able to scheduled physically. We would like to thank our participants and the resource persons for joining the training.